Jack Taylor, waKen Bruen's chidhakwa uye zvinyorwa zvekusviba kweIrish | Zvazvino Zvinyorwa
Jack Taylor, chidhakwa uye chinyorwa kuIrish kusviba kwaKen Bruen
Mufananidzo wemutambi Iain Glen uye munyori Ken Bruen: (c) Martin Macguire
Ngatitii mazuva masere kana mapfumbamwe. Iyi ndiyo nguva yakanditorera kuverenga matatu chete akashandurwa uye akaburitswa mazita ezvinoteedzana nemunyori weIrish Ken bruen nezve mutikitivha wake uye antihero Jack taylor. Hitch, saTaylor kudoro, fodya, coca uye chero chii chinoiswa pamberi pake, yanga ichizadzisa.
Neraki, kushomeka kwake kwemamwe mabhuku "kuvanzika" kunopihwa ne yakanakisa terevhizheni ndiani nyeredzi Iain Glen, mutambi weScotland uyo akazvarwa akanakisa uye anobuditsa manyorerwo chero zvaanoita uye chero zvaari anotaridzika. Saka ndinopedza mwedzi ndichikumikidza chinyorwa ichi kwauri.
4 Jack Taylor paterevhizheni
5 Mamwe mabhuku naBruen
Bruen akaberekerwa mu Galway en 1951, uye iro guta nderimwe remavara ake mumanovel ake. Akashandisa se Purofesa weChirungu munzvimbo dzakasiyana siyana kupota nyika senge Africa, Japan, Southeast Asia kana South America asati atanga kutsikisa mabhuku mukutanga kwema90. Akanyora zvinopfuura makumi maviri enganonyorwa pakati pawo dzakateedzana Jack taylor Kana iyo R&B kufona, ichitarisa mapurisa Roberts naBrant, pakati pevamwe.
Mabasa ake anomira pakuve mapfupi enganonyorwa (asina mapeji mazana maviri nemakumi mashanu), e Zvakare zvitsauko zvipfupi uye zvirevo kunyange zvipfupi, zvisinganzwisisike uye zvakaremerwa nesimbi. Panyaya yeiyo Jack Taylor akateedzana, iko kusanzwisisa kunonyanya kuwanda asidi kana zvichitaurwa mukati munhu wekutanga ne protagonist. Yavo constants mimhanzi mareferenzi uye zvinyorwa zvekunyora. Uye zvirokwazvo kune zvinosetsa uye mutauro wakashata mune dzimwe nhaurirano dzakajeka uye izvo zvakawedzera zvakapotsa kupfuura rondedzero.
Zvinotomboita kuti vadzingwe kubva kuGarda Síochána (Irish National Police). Iwe unofanirwa kunyatsoita nhanho yekuzviita. Kunze kwekunge iwe ukave unonyadzisa kuruzhinji, zvimwe zvese zvimwe zvinhu zvakakanganisirwa iwe. Ndakanga ndasvika pamuganhu. Vazhinji ve
Uye zvakadaro aisakwanisa kuwana zvirinani. Kana pane kudaro, aisakwanisa kurega kunwa. Usandibata zvisiri izvo. Mapurisa eIrish uye kunwa vane hukama hwekare, hunenge hune rudo. Mupurisa ane hunyanzvi ndiye anofungidzirwa, kunyangwe kana asiri ekunyomba zvachose, mukati nekunze kwemuviri.
Zvinotanga kudaro Matanda, wekutanga zita mune akateedzana. Ndiwo maitiro ake uye chimiro chisina kuchinja mune mamwe maviri, Kuurayiwa kwema gypsies y Mutambi. Uye saka Jack Taylor anozvizivisa, prototype yemutikitivha wechidhakwa, akaomarara, benzi, kupererwa uye kuuraya, izvo hazvitsvage kana kuda tsitsi, kunzwisisa kana kunzwira tsitsi.
Ari kugara achidhonza kusagadzikana seinovava sekubudirira asi zvakare achigara achimuziva iye uye naye kusagadzikana mupfungwa. Uye nguva dzose nekumwe kurohwa kwakanaka kwaanotora uye kwaasingabvise mune chero novel.
Taylor dzakatenderedza makumi mashanu, ainamata baba vake, ndiani aive akamufarira Kuverenga, iyo chete yakanaka kupindwa muropa iyo inozivikanwa.
Akaita kuti nditange naDickens. Zvishoma nezvishoma akandizivisa kune echinyakare semunhu asingade chinhu. Nguva dzose akangwara, zvichiita kuti nditende kuti sarudzo yanga iri yangu. Gare gare, apo chamupupuri chekuyaruka chakachinjisa zvese zvinhu kumusoro, akandizivisa kune nhoroondo yematsotsi. Zvakaita kuti ndirambe ndichiverenga. Akaisawo padivi nhevedzano yemabhuku uye ndokundipa pasuru ine huzivi nhetembo uye hokore: mhosva dzekuAmerica mhosva. Panguva iyoyo ndanga ndave bhibliophile mune rechokwadi rezwi. Kwete kungofarira kuverenga chete, ndaifarirawo mabhuku sekudaro. Akange adzidza kukoshesa hwema, kusunga, kudhinda, kubata chaiko kwemavhoriyamu.
Asi anovenga amai vake sekumuvenga kwaanomuita uye ivo vanochengetedza hunopfuura hukama hunotonhora uko mumwe weavo vechipiri mavara asingakwanise kusavapo munoveli yakamisikidzwa muIreland inoita basa rakakosha: iyo baba Malachy, iye chaiye akavimba mupristi wamai vake uyo anogara achitenderera achishora maitiro nehupenyu hwaJack.
Shamwari dzinoonekera nekusavapo kwavo mukuvapo kwekusagadzikana kwaTaylor, chengetera muridzi waJack wenguva dzose webhawa (uye chete iyo yaanobvumidzwa kupinda), rudzi rwechipiri mubereki kana muchengeti. Uyezve mumwe muridzi weimwe bhawa, Jeff, waanoita hukama naye hunogona kunzi hushamwari.
Ndainzwa kunge ndakura. Pandakanga ndave pedyo namakumi mashanu, gore rega rega rakaipa randakanga ndararama raive rakaiswa kumeso kwangu. Iyo hangover yaienda pandiri kwemamwe makore mashanu akaoma. Jeff akabvunza kuti:
"Papa vanoti rozari here?"
-Izvi zvinoreva kuti hongu?
(Kubva Kuurayiwa kwema gypsies).
Pakati, Ann henderson, mukadzi akapinda Matanda anobhadhara mabasa aTaylor kuti aongorore rufu, zvinonzi nekuzviuraya, kwemwanasikana wake achiri kuyaruka. Henderson ndiye achave zvisingaite rudo rwehupenyu hwake, iyo icharamba ichioneka mumanovel anotevera.
Sechiitiko chechiito guta re Galway kuti, pamwe chete nezvinyorwa zvechigarire zvinyorwa (chitsauko chimwe nechimwe chinopera kana kutanga nekotesheni) uye mareferenzi emimhanzi zvese mutsananguro uye muchirevo, vanoumba mhepo yakanaka yechikamu chezviitiko chimwe nechimwe chinonakidza.
Nekudaro, iko kutsvedza kudiki kwechiyero chakanangana ne humwe hunhu hwevanhu hwevatambi kudarika kukosha kwezvikamu izvi zvinoratidzika kubva pane zvakateedzana. Uye sekutaura kwandakaita, zvinosuwisa kuti havana kuramba vachitsikisa mamwe ese emanoveli vanozvinyora.
"Jack, taifunga kuti warega kuverenga," [Jeff] akadaro.
Matanda (Varindi, 2001)
Kuurayiwa kwema gypsies (Kuuraya kweTinkers, 2002): Mushure mekupedza gore muLondon, Jack anodzokera kuGalway, aine mutsva kupindwa muropa necocaine. Paanongodzoka, anowana imwe nyaya. Mumwe munhu ari kuuraya vechidiki vanofamba-famba vane miviri yavo yakakandwa mukati meguta. Musoro wemhuri yechiGypsy unomupa kuferefeta. Uye Jack Taylor, kunyangwe akapindwa muropa, anochengetedza kugona kwake kuziva kwekutarisa uye kuti ndeipi mibvunzo yekubvunza. Nerubatsiro rwemupurisa wechiRungu achaedza kugadzirisa nyaya yacho.
Vakafira Kutenda veMagdalen (2003)
Mutambi (Dramatist, 2004): Jack akachena, anobuda nemukadzi akura uye anotobvuma kuti aenda kumass zvakare. Asi zvino kufa kwevadzidzi vaviri vane miviri inowanikwa iine kopi yebhuku nemunyori John Millington Synge kunopera kuita senge kune tsaona. Jack anotanga kutenda kuti kune mhondi inonzi Iyo Playwright iyo icharamba ichiita. Asi ichave mamwe mamwe mamiriro ezvinhu ega anozomuisa pamucheto wegomba rakadzika mugumo unorova zvisina tsitsi.
Musoro wedombo (2011)
Green Gahena (2015)
Iyo Emerald Nhema (2016)
Tiye Midzimu yeGalway (2017)
Jack Taylor paterevhizheni
Iyo nhepfenyuro yeterevhizheni (inogona kuonekwa mu Netflix) inosanganisira Zvitsauko 9 zveawa nehafu duration. Iyo yakavakirwa pamabhuku uye inokamura zvikamu izvo semuenzaniso zviri zviviri munoverengeka. Zvakare wedzera mavara asiri kana bvisa vamwe, asi zvinechekuita zvinoratidza zvinyorwa zvinovimbika nekukosha kwayo. Uye pamusoro pezvose, dudziro ye Iain Glen.
Waste style, kirasi uye kuvepo izvo zvinomuratidzira iye kunyangwe achionekwa musara, uyu mutambi weScotland, ava kunyatso kuzivikanwa Game yezvigaro, a yekutanga kirasi basa achipa Taylor rake rakapwanyika muviri uye rakasviba hunhu. Izvo zvinopera pasina kutaura kuti zvinokurudzirwa kwazvo, kunyangwe iwe uchiziva Chirungu kana kwete, chiona mune yekutanga vhezheni.
Zvinonyadzisa izvo. kuda "kupfavisa" kuomarara yemanoveli kana hunhu hwevamiriri vayo. Taylor ndiye akaipisisa mumabhuku uye iko kushuva kumudzikunura kana kurumbidza hunhu hwake hushoma kunogumisira kwakanganisa hunhu kana, zvirinani, kusatendisa vaverengi vakaverenga ese mabhuku.
Zvisinei, iyo huru yekugadzwa muGalway, nzvimbo uye matambiro Vatambi vanotungamirwa neanoshamisa Iain Glen anoita akateedzana akakosha kune chero akanaka fan weiyo genre.
Mamwe mabhuku naBruen
R & B akateedzana: Kusungwa kukuru y Mutorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Jack Taylor, chidhakwa uye chinyorwa kuIrish kusviba kwaKen Bruen
Vanoidzorera kuNetflix, uye ndinonakidzwa nazvo. Ini ndinobvumirana zvachose neako ese makomendi. Akanaka mutambi uye akateedzana.
Mabhuku akanakisa akaiswa mugungwa
Francisco Narla. Mibvunzo gumi yemunyori weLain the bastard.